Angawoonni Itiyoophiyaa Ajjechaa Gaggeeffame Qorachuu Qabu : Amnastii Intarnaashinaal
Fulbaana 18, 2018
Finfinnee keessatti hiriira Wiixata kaleessaa gaggeeffamee irratti polisiin tarkaanfii fudhateen namnii 5 ajjefamuu kan ilaaleen angawoonni Itiyoophiyaa qorannaa qubsaa fi hunda keessaa qabu akka gaggeesuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Amnestii Intarnaashinaal har’a gaafatee jira.
Ajjechaan kaleessaa kun walitti bu’iinsa gosaa isa dhuma torban darbe jalqabee gaggeeffamaa turee fi lubbuu nama 58 galaafate hordofuun uumame jedha.
Walitti-bu’iinsa gosaa namoota hedduu madeessee, qe’e ofii irraa godaansiise kana kan ilaaleen mootummaan tarkaanfii hin fudhanne jechuun hiriirri kun daandilee Finfinnee irratti kaleessa gaggeffame jedha gareen mirga dhala namaaf falmu kun.
Amnestii Internashinaal akka jedhutti hokkarri gosaa kun ABO biyyatti deebi’uu hordofuun kan dhufe yoo ta’u kanneen deggersaaf ba’an keessaa hangii tokko gareelee Oromoo hin taane keessumaa Guraagee fi Gaamoo Burraayyuu keessatti haleelan jedha.
Angawoonni wawwaannaa uummataaf maaliif deebii akka hin kenniin hafan akksumas hiriirtoota karaa nagaan hiriiran irratti haleellaa gaggeeffamee kan ilaaleen ibsuu qabu jedha Amnestiin.
Gama biraatiin polisiin Federaalaa ibsa kaleessa VOAf kenneen kanneen ABO fi Arbanyooch Ginbot 7 of-fakkeessuun badii kana geesisee jiru jechuun isaa ni yaadatama.
Hokkarri Finfinnee Fi Naannawaa Ishee Lubbuu Galaafate
Paartileen mormituu 7 ijjeechaa fi saamichii dhiyoo Itoophiyaa keessaa mumullatu waan itti callisanii miti jedhanii irratti walii galan
Koomishiner Zeeyinuu Jamaal: Ajjeechaan Buraayyutti Geggeessame Ginbot 7 fi ABOtti Fakkeessuuf Ka Dursamee Qindeessame